प्रहरीका ४८८ इन्स्पेक्टरको सरुवा, को कहाँ पुगे? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
प्रहरीका ४८८ इन्स्पेक्टरको सरुवा, को कहाँ पुगे? (सूचीसहित)
काठमाडौं : प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४ सय ८८ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को सरुवा गरेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागले ४८८ जना प्रहरीको सरुवा गरेको हो । सरुवा भएका प्रहरी निरीक्षकको असोज महिनादेखि नै सरुवा भएको ठाउँबाट तलब भत्ता बुझ्ने गरी सरुवा गरिएको जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस ५६८४ प्रहरी जवानको सरुवा, को कहाँ? (सूचीसहित)
सरूवा सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
ट्याग्स: इन्स्पेक्टर, नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सरुवा